विद्यार्थी नेता पौडेलले किन बाँडे खानीगाउँको जनप्रिय प्राविमा शैक्षिक सामग्री ?
आज : २०७४ फाल्गुण १३ आइतबार|समय : ०५:५२
पर्वत । तपाई आफ्नो जन्मदिन कसरी मनाउनुहुन्छ ? साथीभाई बटुलेर ? वा रमाइलो गरेर ? तर एक विद्यार्थी नेताले आफ्नो जन्मदिन शैक्षिक सामग्री दिएर मनाएका छन् । पर्वतको नेपाल विद्यार्थी संघ गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका ईकाई सभापति, नेपाल विद्यार्थी संघ पर्वतका जिल्ला सदस्य शिशिर शर्मा पौडेलले पर्वतको फलेवास नगरपालिका ५ खानीगाउँमा रहेको जनप्रिय प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत २७ जना विद्यार्थीलाई कापी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री उपहार दिएर आफ्नो जन्मदिन मनाएका हुन् । पौडेलले शनिवार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्यालयमा नै पुगेर वितरण गरेका हुन् । २५ वर्ष पुरा भई २६ वर्षको उपलक्ष्यमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको हो । उक्त कार्यक्रमको समन्वय पत्रकार साजन परियारले गर्नुभएको थियो ।
किताब कापीको अभावमा पढ्ने अबसरबाट बञ्चित हुन नपरोस भनेर विद्यार्थीहरुलाई कापी र कलम उपहार दिएको पौडेलले बताए । पौडेलले वर्षभरि खाजा र अन्य कामका लागि जम्मा भएको रकम बचाएर जन्मदिनको अबसरमा शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गरेको उनको भनाई छ । बालबालिका नै भविष्यका कर्णधार भएकाले उनीहरुलाई शिक्षा दिनुपर्ने हुनाले बिद्यालयमा शैक्षिक बातावरण तयार होस् भन्ने उद्देश्यले शैक्षिक सामाग्री बितरण बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी एवम् नेपाल बिद्यार्थी सघ केन्द्रिय उपाध्यक्ष्य डिल्लिराम सुबेदीले अनावश्यक खर्च गर्ने समाजका बिचमा शर्माले गरेको सामाजिक काम प्रेरणादायी भएको बताए । उनले युवाहरुको सक्रियताले अन्य युवाहरुलाई समेत प्रेरणा मिल्ने बताए । बालबालिका भोलीको कर्णदार भएकाले उनीहरुको शिक्षा स्वास्थ्यमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघ पर्वतका अध्यक्ष मिलन सुवेदीले शर्माले वितरण गरीएको शैक्षिक सामग्रीले विद्यार्थीको उज्जल भविष्य निमार्णमा सहयोग पुग्ने बताए । विद्यालयका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिवारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति शिशिर क्षेत्री, कार्यक्रम संयोजक तथा पत्रकार साजन परियार लगायतले बोल्नुभएको कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी संघ पर्वतका उपाध्यक्ष किशोर सुवेदी, नेपाल विद्यार्थी संघका नेता अजय पोख्ररेल, शर्माका बुवा मोहराज शर्मा लगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गा सुवेदी लम्साल र कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल विद्यार्थी संघ गुप्तेश्वर क्याम्पसका ईकाइ सचिव सन्तोष पाठकले गरेका थिए ।